ကျနော်တို့အဓိကလူမှုမီဒီယာနောက်ဆက်တွဲနှင့်အတူ INSTA - ကျော်ကြားကျောက်သားကလေးများနှင့်ပြောဆိုသော - နှုန်းထားများ
ကျနော်တို့အဓိကလူမှုမီဒီယာနောက်ဆက်တွဲနှင့်အတူ Insta - ကျော်ကြားကျောက်သားကလေးများနှင့်ပြောဆိုသော
သင်သည်ငါကဲ့သို့သော Instagram သုံးစွဲသူဖြစ်လျှင်ဤမိန်းကလေးများသည်သင်၏ feed ၌ကျိန်းသေတွေ့ရမည်။ သင်သူတို့ပိတ်ဆို့ထားသည့်နောက်လိုက်များနှင့်သူတို့၏ Instas နှစ်သက်မှုထောင်ပေါင်းများစွာကိုမြင်သောအခါသင်၏မေးရိုးကျဆင်းသွားသည်ကိုမပြောရန်မလိုအပ်ပါ။
The Tab CU ၏နောက်လိုက်အများဆုံးအမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ မေးခွန်းကြီးများမေးခဲ့သည်။ သင်၏ Lost Gulch ရုပ်ပုံများကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။ ထို bikini တံဆိပ်များနှင့်သင်ထိတွေ့မိသောအခါအခမဲ့ပစ္စည်းရပါသလား။ သင်၏လူမှုမီဒီယာကိုလုံးဝဖျက်ပစ်လိုပါသလား။
Lara, 72.1k, ဒုတိယနှစ်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, @laramcwhorter
Insta vibe: ခေတ်မီ & ဖက်ရှင်
သူမနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအမှတ်တံဆိပ်: Fashion Nova, BoutineLA, NA-KD ဖက်ရှင်
ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်မှဒေသခံ Lara ကသူမ၏ Insta ကိုသူမ၏ဒုတိယကြောင်နီဂယ်လ်ဟုခေါ်သည်။ အနာဂတ်တွင်သူမသည်သူမအနေဖြင့် 'သူမအစာကျွေးခြင်းတွင်မပါ ၀ င်သောကြံ့ခိုင်မှုဘက်သို့လှုံ့ဆော်မှုပိုမိုရရှိရန်မျှော်လင့်သည်။ '
Lara ကသူမသည် 'ဤနေရာတွင်နှင့်နေရာများတွင်သတိထားမိခြင်းခံရသည်။ သို့သော်သူမသည်သူမ၏ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများထွက်နေစဉ်တွင်သူမသည်သူမအားဘာမှမပြောခဲ့ပါ' ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ပထမနှစ်နှစ်၏ကျဆုံးခြင်းစာသင်ကာလအတွင်းအမှန်တကယ်သွား။ သူမ 10k ကျော်လွန်ပြီးနောက် 'snowballed' '။
သူမ၏လူမှုမီဒီယာကိုသူမဖျက်ပစ်မည်လားဟုမေးသောအခါသူမက '၎င်းသည်အကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာစဉ်းစားခဲ့ပြီးကိုင်တွယ်ရမည့်အလွန်ခက်ခဲသည့်အချိန်များရှိသည်။ လူများသည်အမှန်တကယ်ပင်အဓိပ္ပာယ်ရှိနိုင်သည်။ App ကိုဖျက်ခြင်းမှသူမအဘယ်အရာကိုတားဆီးနေသနည်း။ သူမသည်သူမအနေဖြင့်သူမ 'ယခုအချိန်များစွာနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာကိုမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးယခုသူပြန်သွားနိုင်တော့မည်မဟုတ်' ဟုအကြောင်းပြသည်။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချက် - Lara ရဲ့အဓိကဝါသနာကပန်းချီကားဖြစ်တယ်၊ အကယ်လို့သင်ဟာသူမရဲ့ပို့စ်တချို့ကိုလှန်လှောကြည့်လိုက်ရင်သူမရဲ့ Instas မှာပြထားတဲ့သူမရဲ့အနုပညာအချို့ကိုသင်ဖမ်းမိလိမ့်မည်။
ကဲန်၊ ၅၆ ကီလို၊ အငယ်တန်း၊ ဗိသုကာ၊ @kendelkay
Insta vibe: မင်္ဂလာပါ
သူမနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအမှတ်တံဆိပ်: Koana ရေကူး, Nora ရေကူး
Kendel သည်သူမ၏နောက်လိုက်သည်လွန်ခဲ့သည့်နွေ ဦး ရာသီက California သို့မကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်စဉ်ကောင်းကင်ပြာဒုံးပျံကိုရေတွက်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သူမသတိထားမိသည်ဆိုပါက၎င်းသည် 'ပါတီပွဲများ၊ လုံးဝရိုးသားမှုအရ Kendel ကသူမသည် 'ဘာလို့ဒီလောက်များများစားစားလိုက်ရတာလဲမသိဘူး' ဟုပြောခဲ့သည်
သူမသည် 'ကျော်ကြားမှု' ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသူမသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးသူမသည်တစ်ခါတစ်ရံကင်မရာများကို အသုံးပြု၍ 'ပိုမိုထင်ရှားသော၊ ယခုအချိန်ထိဓာတ်ပုံများ' ရိုက်ကူးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်
Kendel ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သူမသုံးစွဲသောအချိန်ကာလသည်သူမအတွက်ကြီးမားသောနောက်လိုက်များမတိုင်မီကတည်းကအတူတူဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သူမအစဉ်အဆက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဖျက်ပစ်မလား? Kendel ကသူမသည်အမြဲတမ်းသွေးဆောင်မှုခံနေရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည် 'ယင်းကိုစွဲလမ်းပြီးအလုပ်နှင့်အတန်းမှအာရုံလွဲသွားစေသည်။ '
Ken မှအကြံပေးချက် - 'သင်၏ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုသင့်ဖုန်းမှရက်အနည်းငယ်အနည်းငယ်မျှဖယ်ရှားပစ်ရုံမျှနှင့်ဖျက်ပစ်ပါ။ '
နီကိုးလ်၊ ၃၅.၈ ကီလိုဂရမ်၊ အငယ်တန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒီဇိုင်းရှိဗိသုကာပညာ၊ ချစ်တယ်
Insta vibe: ရောင်စုံ & '' 70s (ရံဖန်ရံခါရှဥ့်ပုံနှင့်အတူ) မှုတ်သွင်း
သူမနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအမှတ်တံဆိပ်: Oli နှင်းဆီဒီဇိုင်းများ၊ အဆုံးမဲ့တပ်မက်မှု၊ အိမ်တွင်းစုပေါင်းမှု၊
နီကိုးလ်သည်မိမိကိုယ်ကို 'ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသူ' ဖြစ်ပြီးသူမသည် 'ဘုရားသခင်နှင့်အတူပေးထားသောအခွင့်ထူးအားလုံးကိုပျော်မွေ့နေသည်' ဟုပြောကြားခဲ့သည် သူမသည်သူမ၏ Instagram ကို 'ဓာတ်ပုံတိုင်းအတွက်အနုပညာဖန်တီးမှု' နည်းလမ်းတစ်ခုနှင့် 'အပြုသဘောဆောင်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခြင်း၊ ကူညီပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေကြေးရှာဖွေရန်အခွင့်အရေး' အဖြစ်ရှုမြင်သည်။
သူမအစဉ်အခါထွက်အကြောင်းကိုသတိထားမိခဲ့သလား '' အဆင်မပြေပေမယ့်ဟုတ်တယ် '' ဟုသူမကဆိုသည်။ ထောင်နဲ့ချီတဲ့နောက်လိုက်တွေရှိခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးကဘာလဲ။ သူမသည် 'သူမနှင့်မတွေ့ဆုံမီသူသည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုကြိုတင်သိမြင်ထားခြင်း၏အတွေးများကိုမကြိုက်ပါ။ ' သူမသည်“ လူများကိုစနစ်တကျတွေ့မြင်နိုင်ပြီးပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များသည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်” ဟုသူမပြောလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်က Aspen X-Games မှာ Chainsmokers ဖျော်ဖြေပွဲမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်က 'မင်းကနီကိုးလွိုက်လား?'
ငါ၏အရည်းစား tinder အပေါ်လျှင်ထွက်ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို
သူမသည်မကြာခဏသူမနောက်လိုက်များနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခွင့်အလမ်းများမှ 'wow၊ မင်းဟာငါထင်ထားတာထက်ပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊ နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာကိုမကြာခဏကြားဖူးတယ်' ဟုဝန်ခံသည် ''
နီကိုးလ်ကဆက်လက်ပြောကြားသည်မှာ '' လူ့သဘောသဘာဝသည်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အခြေခံအားဖြင့်အခွင့်အလမ်းရရှိသောအခါလူတစ် ဦး ၏အသွင်အပြင်တစ်ခုစီကိုခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူတို့သင်အလေးချိန်တက်သောအခါသို့မဟုတ်သင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်zရာမ zit ရှိသည့်အခါသတိပြုမိသွားလိမ့်မည်၊ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကမင်းကိုထင်မြင်ချက်ပေးမယ်။ သူတို့ကအရမ်းလိုချင်နေတယ်ဆိုရင်မင်းကိုလိုက်နာလိမ့်မယ်။ ' အဲဒါကသူမရဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ဖို့သူမရွေးချယ်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲသလား။ လုံးဝမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သူမသည်လူမှုရေးမီဒီယာများအား 'ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအယူအဆ' နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကြောင့်အမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ရန်သွေးဆောင်ခံရသည်။
Natalie, ၇၂.၁k၊ အငယ်တန်း၊ ဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ရေး / ရှေ့ပြေးဥပဒေ၊ @nataliennewman
Insta vibe: ပျော်စရာ & flirty
သူမနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအမှတ်တံဆိပ်: သဲသောင်ပြင်အဓိကရုဏ်း, LSpace, Frankie ၏ Bikinis, Montce Swim
Natalie ကသူမသည်အများပြည်သူနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအကြိမ်ကြိမ်သတိပြုမိသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ၎င်းသည်အတန်းသို့သွားရန်ဖြစ်စေ၊ The Hill ၌ဖြစ်စေလမ်းလျှောက်နေသည်ဖြစ်စေသူ့ကိုယ်သူ Insta-ကျော်ကြားသူအဖြစ်မသတ်မှတ်သေးပါ။ သူမသည် Insta ဂိမ်းဖြင့်အစောပိုင်းကစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်သူ၏နောက်လိုက်များသည် 'အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်အစတွင်' တွင်တိုးများလာသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။
သူမ၏ 70k နောက်လိုက်ဖို့အဆင်မပြေ? 'Creepers ။ ' နာတာလီကသူမမှာသူမရဲ့သူငယ်ချင်းတွေဟာသူမရဲ့ Instagram ကိုလူသိရှင်ကြားလှောင်ပြောင်ကြတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်လေးတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Nat သည်ထို 70k ကိုမည်သို့စုဆောင်းခဲ့သနည်း။ သူမသည်သူမ 'နေရာအနှံ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း' နှင့် 'ကြီးထွားလာသောမြို့ကြီး ၁၀ မြို့တွင်နေထိုင်သောကြောင့်သူသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှလူများနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်ခဲ့သည်' ဟူသောအချက်ကိုသူမကဂုဏ်ပြုသည်။
Natalie အတွက် Instagram သည်သူမ 'နေရာများနှင့်အချိန်ကိုမှတ်မိရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအချိန်ယူယူရန်မှာသေချာသည်။
Gab, 23.2k, အငယ်တန်း, စိတ်ပညာ, @gabriellelowrie
Insta vibe: ရောင်စုံ
Gab ကသူမ 'hot သူငယ်ချင်းကသူမကို pic နှင့် tag လုပ်' လိုက်သောအခါကံကောင်းကြောင်းနှင့်နောက်လိုက်များထိုနေရာမှစီးလာသည်။ Gab 100% သည်အလင်းရောင်ကောင်းသောအလင်းရောင်ဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အကြံပြုသည်။
သူမသည်သူမကဲ့သို့တိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟုမည်သည့်အခါကမျှမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။ အထူးသဖြင့်သူမ၌လူအများအပြားတွင်ရှိသည့်“ သွင်ပြင်လက္ခဏာ” ရှိသည်ဟုသူမမထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ကြီးမားသောအောက်ပါရန်တစ် ဦး ကအဆင်မပြေ? 'စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအရာများကိုသင့်ကိုပို့ပေးသောလူကြီးများ။ '
Gab ကကျွန်မတို့ကိုဥာဏ်ပညာအနည်းငယ်ချပေးသည်။ သူမသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလုံးလုံးပယ်ဖျက်ရန်သွေးဆောင်ခံရသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်သူမ၏အတွေးများကသူမအားအဆင့်မြင့်သောသဘောသဘာဝကိုပြသသည်။ သူမသည် 'လူမှုမီဒီယာသည်ဤမျိုးဆက်၏မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အသွင်အပြင်၊ အားလပ်ရက်များမှတစ်ဆင့်အခြားသူများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်လျက်ရှိကြသည်' ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သင်၏ feed ကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်စိတ်ထဲစွဲမှတ်ထားရမည့်အကြံဥာဏ်အချို့ - 'အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘဲအင်တာနက်သည်လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဗားရှင်းကိုပြသနေသောကြောင့်သင်အမှန်တကယ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ချစ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ '
Liv, 20.3k နောက်လိုက်, Sophomore, မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ရေး, @playboilarni
Insta vibe: အထင်ကရ
သူမနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအမှတ်တံဆိပ်: Triangl ရေကူး၊ Superga USA (အလုပ်တွင်)
Liv သည်သူမ၏ Insta ကိုအာရုံမစိုက်နိုင်သော်လည်းငယ်ရွယ်စဉ်ကဂိမ်းကိုသတ်ပစ်ခဲ့သည်။ တောင်ဖလော်ရီဒါမှနယူးဂျာစီသို့ပြန်လာပြီးနောက်သူမ၏နောက်လိုက်သည်အထက်တန်းကျောင်းတက်သည်။
သူမ၏ Instas တွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ရိုက်ခတ်ခံခဲ့ရသော်လည်းရထားပေါ်မှမိန်းကလေးသုံးယောက်သတိထားမိခဲ့သော်လည်း Liv သည်နှိမ့်ချစွာနေခဲ့သည်။ သူမသည်သူမသည်နယူးယောက်ရှိညမှပြန်လာသည့်ပိုလိုတီရှပ်ကြီးတွင်ရှိခဲ့သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်ညကပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသည့်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည့်တိုင်သူမသည်မိန်းကလေးများနှင့်အတူပုံတစ်ပုံကိုရိုက်ယူခဲ့သည်။
Liv သည်သူမ၏ရေးသားချက်များတွင် 'ရံဖန်ရံခါ snide မှတ်ချက်များ' အပြင်သူမနောက်လိုက်များထံမှအပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်ချက်များရပြီးအမြဲတမ်း Insta မှထင်ရှားသောတင်ပါးဆုံရိုးအကြောင်းအရာကိုတင်နေသည်။ သူမကရက်ပ်ဂီတကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကသူမအတွက်လူတိုင်းသိနိုင်ခြင်းမရှိသည့်လက်ရှိသီချင်းများမှထူးခြားသောလိုင်းများဖြင့်စာတန်းများကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်ဟုဆိုသည်။
Jules, 18.6k နောက်လိုက်, အငယ်တန်း, အနုပညာလမ်းညွှန်အတွက်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူကြော်ငြာ, @julezsandak
Insta vibe: ခေတ်မှီ
သူမနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအမှတ်တံဆိပ်: Karma Bikinis, NinjaGlide Hover ပျဉ်ပြား (ဖျားနာခြင်းအချက်မှာသူမသည်ပန်းရောင်ပျံဝဲပျော့ပျောင်းသောဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုရရှိသည်)
Juliette သည်သူမနောက်လိုက်များကကျွန်ုပ် Shmacked and TFM တွင်တင်ပြီးနောက်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲခန့်ကစတင်တိုးပွားလာကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ Jules သည်သူ့ကိုယ်သူထင်ရှားကျော်ကြားသူအဖြစ်မထင်ထားသော်လည်း 'အလယ်အလယ်ရှိတစ်နေရာရာမှာ' ဖြစ်သည်။ သူမသည်, သို့သော်, လူသိရှင်ကြားထွက်သတိထားမိပါဘူး။ တစ်ခါတလေသူမက 'မင်း Julez Sandak လား? အဲဒါမင်းရဲ့နာမည်အမှန်လား ' အဆိုပါတောင်ပေါ်မှာထွက်နေစဉ်။
သူမသည် College Babes, Barstool, ငါ Shmacked နှင့် TFM ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းကိုရပ်စဲလိုက်သောကြောင့်သူမနောက်လိုက်များက 'နှေးကွေးသွားသည်' ဂျူလီကသူမနောက်သို့လိုက်ခြင်းသည်ပလက်ဖောင်းအပြင်ဘက်တွင်နည်းများကြီးထွားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်လိုက်ထိုက်သောအစာကျွေးခြင်းအတွက် Jules ၏အဓိကအကြံဥာဏ်ကဘာလဲ။ 'သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အနုပညာစတိုင်နှင့်ကိုက်ညီသည့်ဗေဒကိုစွဲကိုင်ထားပါ။ '